Home Wararka Xafiiska Rooble oo sheegay in shirka Gollaha Wadatashiga Qaran lagu soo saari...
Xafiiska Rooble oo sheegay in shirka Gollaha Wadatashiga Qaran lagu soo saari doono “HABRAACA DOORASHADA”
Afhayeenka Xukuumadda xilgaarsiinta Maxamed Ibraahim Macalimmuu ayaa caawa soo boggiisa facebook waxaa uu ku sheegay in maalinta Sabtida ah uu shir uga furmi doono teendhada Afisyooni Madaxda DG iyo RW Rooble.
Qoraalka ayaa u qornaa sida hoose.
“Shirka Gollaha Wadatashiga Qaran ayaa si rasmi ah hadii Eebe idmo waxa uu Afisyoone ka furmayaa maalinta Sabtida ee 21ka Ogoosto iyada oo Madaxda Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir ay ka soo wada gali doonaan.
Magaalada Muqdisho ayaa waxa hadda ku suggan Madaxweynayaasha Dowlad Goboleedyada Koofur Galbeed, Hirshabelle iyo Galmudug , waxana la filayaa Madaxweynayaasha kale ee Puntland iyo Jubbaland in ay Muqdisho soo gaaraan.
Kulanka oo uu shir guddoomin doono R’iisul Wasaare Rooble ayaa waxa lagaga hadli doonaa diyaar garowga doorashooyinka Golaha Shacabka, diyaarinta habraacyada doorashooyinka , raadinta dhaqaalaha dhiman ee ku baxaya doorashooyinka ee aan weli soo xeroon iyo sidii horey loogu socon lahaa.”
Hadalka ka soo yeeray Xafiiska RW Rooble ayaa ka hor imanayaa qoraal dhawaantan aay soo saareen Guddiga Doorashooyinka heer federaal, kaasoo lagu soo saaray habraaca Doorashada mudanayaasha aqalka hoose oo dhawaan la filaayo in xulashada ergada iyo Doorashada aay dhawaan bilaabato .
Waxaa xogta aan ka helnay ilo wareedyo lagu kalsoon yahay aay sheegeysaa in gebi ahaanba la tuuri doono habraacii aay soo saareen guddiga doorashooyinka, isla markaana wax laga bedeli doono heshiiskii Setp 17, 2020 taasoo lagu sheegay in degaan doorashada aay noqoto laba degmo, halka loo badinaayo in laga dhigo hal degaan doorasho.